मलाई ससुराले जीवनजलको जस्तो प्याकेटमा औषधी हो यो खाउ निको हुन्छ’ भनेर खुवाउनु भयो त्यसपछि म बेहोस भएँ त्यसपछि…. – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/मलाई ससुराले जीवनजलको जस्तो प्याकेटमा औषधी हो यो खाउ निको हुन्छ’ भनेर खुवाउनु भयो त्यसपछि म बेहोस भएँ त्यसपछि….
टिकापुर​। ‘मलाई ससुराले जीवनजलको जस्तो प्याकेटमा औ ष धी हो यो खा नि-को हुन्छेस् भनेर खुवाउनु भयो त्यसपछि म बे हो स् भएँ । तरपनि अलिअलि हो स् छँदा उहाँले मलाई मेरो खु-ट्टा म सा र्दै, छा म्दै गरेकोसम्म थाहा छ । त्यसपछि थाहा पाईन ।’
कृष्ण कँडेल मेलम्ची पुग्दा सर्वस्व गुमाएका बाढी पिडित`हरुले थाम्न सकेनन् आँसु (भिडियो सहित)